Umkhiqizi we-China Quality Power Wire, Factory - Connexions Technology (Dong Guan) Ltd.
Ikhaya > Imikhiqizo > Intambo yamandla
Ama-Connexions akhiqiza ikhebula lamandla elinolwazi oluningi ngaphezu kwe-17years. Intambo yethu yelambu le-SPT-1 inezinhlamvu ezimbili zezintambo zethusi ezingenalutho. Kuphephile futhi kuphezulu ukuqhuba, ukugoba nokumelana ne-UL. Besilokhu sizinikela ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme kanye nokuhlinzekwa kwamakhasimende okuhle kakhulu. Zonke izintambo zikhiqizwa ngaphansi kohlelo lokuphathwa kwekhwalithi le-ISO9001 kanye no-100% okuhlolwa ngaphakathi endlini ngaphambi kokuthunyelwa. Ama-CTC Connexions azoba ngumenzi wakho obambisene naye wesikhathi eside eChina.
Ama-Connexions akhiqiza ikhebula lamandla elinolwazi oluningi ngaphezu kwe-17years. Le wocingo we-SPT-2 unezintambo ezintathu zezintambo zethusi ezingenalutho. Kuphephile futhi kuphezulu ukuqhuba, ukugoba nokumelana ne-UL. Besilokhu sizinikela ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme kanye nokuhlinzekwa kwamakhasimende okuhle kakhulu.
Ama-Connexions akhiqiza ikhebula lamandla elinolwazi oluningi ngaphezu kwe-17years. Intambo yethu ye-SPT-1 inezinhlamvu ezimbili zezintambo zethusi ezingenalutho. Kuphephile futhi kuphezulu ukuqhuba, ukugoba nokumelana ne-UL. Besilokhu sizinikela ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme kanye nokuhlinzekwa kwamakhasimende okuhle kakhulu. Zonke izintambo zikhiqizwa ngaphansi kohlelo lokuphathwa kwekhwalithi le-ISO9001 kanye no-100% okuhlolwa ngaphakathi endlini ngaphambi kokuthunyelwa. Ama-CTC Connexions azoba ngumenzi wakho obambisene naye wesikhathi eside eChina.
Singabakhiqizi nabahlinzeki be- Intambo yamandla abaqeqeshiwe e-China, abakhethekile ekunikezeni insizakalo eyenziwe ngezifiso. Uma uzothenga ikhwalithi ephezulu ye- Intambo yamandla esitokweni, wamukelekile ukuthola ikhotheshini efektri yethu.